Khilaafka Xukuumada Iyo Ganacsatada Oo Saamayntii Ugu Laxaadka Waynayd Ku Yeeshay Quutal-daruurigii Bulshada Itaalka Daran | Marsa News
Khilaafka Xukuumada Iyo Ganacsatada Oo Saamayntii Ugu Laxaadka Waynayd Ku Yeeshay Quutal-daruurigii Bulshada Itaalka Daran
April 13, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi iyo qaar ka mid ah Ganacsatada waaweyn iyo kuwa dhexe ee Somaliland ayaa la sheegayay in maalintii shalay ahayd ay kulan gaar ah jilbaha is dhigaayeen wallow aanay wax xog ah oo arintaa la xidhiidhaa aan wali la hayn.
Waxa jirtay Cabasho ay maalmihii ugu dambeeyey qabeen guud ahaanba Ganacsatada waddanku kadib markii ay si weyn uga gadoodeen ku dhawaad 40% Tacriifad u dhiganta oo la Kordhiyay cashuurtii Badeecadaha Ka soo Dega Dekada Berbera iyo korodhka xukuumaddu ku samaysay qiimihii ay ku sarrifi jirtay doollarka.
Ilo-wareedyo u dhuun daloola arimahan ayaa xaqiijinayay in Ganacsatadu kulan gaar ah ay la yeelanayeen Madaxweynaha kadib cabashadii xoogganayd ee ay ka muujiyeen tacriifaddii cusbayd iyo qiimaha lacagtii ay xukuumaddu Doollarka ku sarrifi jirtay waxaana la filayaa in kulankaasi labada dhinac mid kastaa xujadiisa la yimaaddo iyada oo ay imika aad u kala fog yihiin.
Lama hubo in kulankaasi uu qabsoomay iyo in kale balse waxa ay wararku sheegayaan in xaaladu wali ay sideedii tahay oo uu wali jiro saluugii ay ganacsatadu ka qabeen korodhka cashuurta alaabta ka soo degta dekada berbera.
Xukuumadda ayaa la sheegay in ay ku adkaysanayso go’aankeeda, halka Ganacsataduna ay ku hanjabeen inay gabi ahaanba joojin doonaan in dekedda ay wax kala soo degaan iyada oo khilaafkani maalmihii ugu dambeeyey uu saameeyey Dekedda Berbera oo aanay Ganacsatadu badeecooyinkoodii cashuuran halka la sheegay in ay alaabo badan kala soo degeen Dekedda Boosaaso.
Khilaafka cakiran ee xukuumadda iyo Ganacsatada u dhaxeeya ayaa yimid markii ay toddobaadkan xukuumaddu soo saartay Go’aan ay ku kulmisay laba arrimood oo kala ah Tacriifad Cusub oo la Kordhiyay, waxaana Kor Loo Qaaday Qiimahii ay wasaaradu wax ku Cashuuri Jirtay ee sarifka Lacagta Dollarka ah ee Cashuurta Lagu qaado oo hore u ahaan Jiray halkii doollarba 5000 oo S/land shilin ah halka ay Toddobaadkan xukuumaddu ka dhigtay 7000 oo Somaliland shilling ah.
Ganacsatada ayaa ku doodaysa in Tacriifaddaasi u dhiganto 40% oo la Kordhiyay cashuurtii Badeecadaha Kasoo Dega Dekadda Berbera, marka Laga Reebo raashinka oo Isaga La Kordhiyay 20%. Tallaabadan ay xukuumaddu qaaday ayaa keentay in ganacsato badani iyaguna badeecooyinka daruuriga ah bulshada ku kordhiyeen taasi oo culays weyn ku sii ku keentay shacabka danyarta u badan ee reer Somaliland oo marka horeba la daalaa dhacayay dhibaatada sicir bararka iyo qiimo dhaca shilinka Somaliland.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaadhay Dekedda Berbera ayaa tibaaxaya in aanay Ganacsatadu maalmihii ugu dambeeyey wax alaabo ah cashuuran iyada oo badeecooyinkooda ku sugan dekedda ay ku socoto wakhtiga ay yaallaan oo ay ku sii kordhi karaan cashuuro kale balse ay sheegeen in aanay aqbali Karin tallaabooyinkan ay xukuumada madaxwayne biixi ku soo rogtay ganacsigii.